Shbakada Caalmiga Ah Ee Alsharq Ayaa sheegtay in si aan hore loo arag uu Imaaraadku milateri ahaan isugu ballaadhinayo guud ahaan gobalka Geeska Afrika isaga oo u jeeda in uu xoojiyo awoodda uu ku yeelan karo marin biyoodyada Hormus iyo Baabul Mandab, iyo sida oo kale xeebaha Yemen iyo Geeska Afrika. | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Shbakada Caalmiga Ah Ee Alsharq Ayaa sheegtay in si aan hore loo...
Shbakada Caalmiga Ah Ee Alsharq Ayaa sheegtay in si aan hore loo arag uu Imaaraadku milateri ahaan isugu ballaadhinayo guud ahaan gobalka Geeska Afrika isaga oo u jeeda in uu xoojiyo awoodda uu ku yeelan karo marin biyoodyada Hormus iyo Baabul Mandab, iyo sida oo kale xeebaha Yemen iyo Geeska Afrika.
Hay’adda midowga xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah oo fadhigeedu yahay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga, ayaa war rasmi ah oo ay dorraad 29kii Diisambar 2017 soo saartay, ku codsatay in la xidho saldhigyada milateri ee dawladda Imaaraadka Carabtu ay ku leedahay dhulka Soomaalida, iyada oo ku sababaysay in ay khatar ku yihiin ammaanka iyo nabadgelyada gobalka Geeska Afrika.
Hay’adda ‘International Federation for Human Rights’ ayaa warmurtiyeedkan ay warbaahinta u qaybisay ku sheegtay in dawladda Imaaraadka Carabtu ay saldhigyadeeda ku yaalla gobalka Geeska Afrika iyo dawlado kale oo Afrika ah u adeegsato xoojinta awoodda ay ku leedahay Geeska Afrika iyo dagaalka ay ka qaybqaadanayso ee labadii sano ee u dambeeyey ka socda dalka Yemen.
FIDH waxa ay sheegtay in saldhigyada Imaaraadka Carabtu ay khatar weyn ku yihiin dadka Soomaalida ah ee deegaannada ay ku yaallan. Gabbood fallo xunna ay kula kacaan xuquuqdooda muwaadinnimo ee dhinaca ammaanka, iyada oo ay jirto mucaaradad xooggan oo ay dadka Soomaalidu kaga soo horjeedaan joogitaanka milateri ee Imaaraadka.
Warkan oo uu Geeska Afrika ka soo xigtay shabakadda wararka ee Asharq, ayaa hoosta ka xarriiqay in ay jiraan eedaymo soo noqnoqday oo Imaaraadka ku xidhiidhinaya falal dembi dagaal noqon kara oo gobalka ay ka geystaan iyo in ay khatar ku yihiin waxa ku sheegtay midnimada, ammaanka iyo xasiloonida. Waxa aanay hay’addu sababtaas awgeed, ku baaqday in la xidho saldhigyadaas milateri.
FIDH oo dawladda Imaaraadka ku eedaysay in ay ku socoto khayraadka Soomaalida ayaa waxa kale oo ay warbixintan ku sheegtay in si aan hore loo arag uu Imaaraadku milateri ahaan isugu ballaadhinayo guud ahaan gobalka Geeska Afrika isaga oo u jeeda in uu xoojiyo awoodda uu ku yeelan karo marin biyoodyada Hormus iyo Baabul Mandab, iyo sida oo kale xeebaha Yemen iyo Geeska Afrika.
Isku ballaadhinta milateri ee ay Imaaraadku ka wadaan Geeska Afrika ayaa ay hay’addu ku sheegtay mid isugu jira Istaraatiji iyo ka ganacsiga iyo maamulka dekedaha iyo gegooyinka diyaaradaha ee muhiimka u ah milateri ahaan iyo ganacsi ahaan, si ay wejiyadaas badan dhammaantood uga faa’idaysato, waxa aanay warbixintu si gaar ah u xustay dekadaha Cadan, Jabbuuti iyo dhismaha saldhigga milateri ee lagu wado in uu Imaaraadku Berbera ka samaysto.
Midowga Xuquuqda aadanaha ee Caalamiga ahi, waa hay’ad madaxbannaan oo la aasaasay sannadkii 1922 kii, waxa aana ku midoobay 184 urur oo ka jira in ka badan 120 dal oo dunida ah. FIDH waxa ay ka shaqaysaa xuquuqda aadanaah ee madaniga, siyaasiga, dhaqaalaha, aqoonta iyo bulsho intaba.
Previous articleDaawo, Dekada Berbera Oo Rubuc Qarni In Ka Badan La Dhutinaysa Taagii Maraakiibta Soo Xidhi Lahaa,iyo Lacagtii Loogu Talo Galay Oo La Lunsady
Next articleHogaaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un Oo Si Adag Ugu hanjabay Maraykanka